ပုဗ္ဗာရုံကျောင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ပုဗ္ဗာရုံကျောင်းဟောင်းနေရာတွင် အာသောကမင်း၏ ကျောက်တိုင်နှစ်ခု၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ သာဝတ္ထိမြို့
ပုဗ္ဗာရုံကျောင်း (ပါဠိ: ပုဗ္ဗာရာမ; pubbārāma )သည် ဝိသာခါ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့သည့် ကျောင်းတော်ဖြစ်ပြီး သာဝတ္ထိမြို့၏ အရှေ့ဘက်မျက်နှာ၌ တည်ရှိသည်။
တစ်ခုသောနေ့တွင် ဝိသာခါသည် ကျွန်မဖြစ်သူနှင့်အတူ မြတ်စွာဘုရားရှိရာ ဇေတဝန်ကျောင်းတော်သို့ တရားနာယူရန် သွားရောက်၏။ ကျောင်းတောသို့ သွားသည့်အခါတွင် ဝိသာခါသည် သူမ၏ မဟာလတာတန်ဆာကို ဆင်မြန်းသွား၏။ ကျောင်းတော်မုခ်ပေါက်ဝသို့ ရောက်သည့်အခါတွင် မဟာလတာတန်ဆာကို ချွတ်ကာ ဃနမဋ္ဌကတန်ဆာကို ဆင်မြန်း၏။ မဟာလတာတန်ဆာကို ကျွန်မအား သိမ်းဆည်းထားစေ၏။ ထို့နောက်တွင် မြတ်စွာဘုရားထံမှ တရားကို နာကြား၏။
တရားနာယူပြီးနောက်တွင် ဝိသာခါသည် သုပ္ပိယာဥပါသိကာမနှင့်အတူ ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ပရဝုဏ်အတွင်း လှည့်လည်ပြီးနောက် ကျောင်းပြင်သို့ ထွက်လာခဲ့သည်။ ထိုအခါကျမှ ကျွန်မက မဟာလတာတန်ဆာကို တရားဟောရာနေရာတွင် မေ့ကျန်နေခဲ့ကြောင်း သိရလေသည်။ ဝိသာခါသည် ကျွန်မဖြစ်သူအား ပြန်ယူရန် စေခိုင်းလိုက်၏။ အရှင်အာနန္ဒာသည် မဟာလတာတန်ဆာကို သိမ်းထားပြီးဖြစ်ပါက ပြန်၍ မယူခဲ့ရန်နှင့် အရှင်အာနန္ဒာအား လှူဒါန်းပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုပါ လျှောက်ထားရန် ကျွန်မကို မှာကြားလိုက်လေသည်။
ကျောင်းတော်သို့ ရောက်သွားသောအခါတွင် အရှင်အာနန္ဒာသည် မဟာလတာတန်ဆာ သိမ်းဆည်းထားသည့်နေရာကို ကျွန်မအား ပြသ၏။ သို့ရာတွင် ဝိသာခါ မှာကြားသည့်အတိုင်း လျှောက်ထားပြီး မဟာလတာတန်ဆာကို မယူဘဲ ပြန်ခဲ့သည်။ ကျွန်မသည် ဝိသာခါထံသို့ ရောက်ရှိလာ၏။ ထိုအခါ ဝိသာခါသည် "အသျှင်မြတ်တို့သည် မဟာလတာတန်ဆာကို ထိန်းသိမ်းရန် ပင်ပန်းကြပေလိမ့်မည်" ဟု ပြောကာ ကျွန်မအား သွား၍ ယူခိုင်းပြန်သည်။ ထို့နောက်တွင် ဝိသာခါသည် မဟာလတာတန်ဆာကို ကိုးကုဋေဖြင့် ရောင်းချ၏။ ဝယ်မည့်သူ မရှိသဖြင့် မိမိပင် ပြန်၍ ဝယ်ယူ၏။
ဝိသာခါသည် ပစ္စည်းလေးပါးတို့တွင် အဘယ်ဖြင့် လှူဒါန်းရန် ရပါမည်နည်းဟု မြတ်စွာဘုရားအားး မေးမြန်း၏။ မြတ်စွာဘုရား၏ မြို့၏ အရှေ့ဘက်မျက်နှာစာတွင် ကျောင်းဆောက်လုပ်လှူဒါန်းသင့်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
မြတ်စွာဘုရား မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း သာဝတ္ထိမြို့၏ အရှေ့ဘက်မျက်နှာတွင် ပုဗ္ဗာရုံကျောင်းကို ဆောက်လုပ်လေသည်။ ကျောင်းမြေနေရာအတွက် ကိုးကုဋေ၊ ကျောင်းအတွက် ကိုးကုဋေ၊ ကျောင်းတွင် ပူဇော်ပွဲအတွက် ကိုးကုဋေ စုစုပေါင်း ၂၇ ကုဋေ ကုန်ကျ၏။ ကျောင်းသည် ဘုံနှစ်ဆင့်ရှိသည့် ပြာသာဒ်ကျောင်း ဖြစ်သည်။ အထက်ဘုံအဆင့်၌ တိုက်ခန်း ငါးရာ၊ အောက်ဘုံအဆင့်၌ တိုက်ခန်းငါးရာ စုစုပေါင်း တိုက်ခန်း ၁၀၀၀ ပါဝင်၏။ ကျောင်းပရဝုဏ်သည် ရှစ်ပယ်ကျယ်ဝန်းသည်။ ဘုံနှစ်ဆင့်ကျောင်းပြာသာဒ်ကြီးကို ဝန်းရံကာ ပြာသာဒ်ငယ် ငါးရာ၊ ကျောင်းငယ် ငါးရာ၊ ဇရပ် ငါးရာတို့ကိုပါ ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ပုဗ္ဗာရုံကျောင်းကို ဆောက်လုပ်ချိန်သည် ကိုးလ ကြာမြင့်ခဲ့သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ဦးရွှေအောင် မဟာဝိဇ္ဇာ (သက္ကတ)၊ ဝဋံသကာနှင့် သိရောမဏိ (၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၂)။ ဓမ္မပဒ (ယမကဝဂ်၊ စိတ္တဝဂ်၊ အပ္ပမာဒဝဂ်၊ ပုပ္ဖဝဂ် ပေါင်းချုပ်) (ဒုတိယအကြိမ် ed.)။ အမှတ် ၃၈၊ ၁၀၉ လမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်၊ ရန်ကုန်မြို့: ရာပြည့်စာအုပ်တိုက်။ pp. ၄၈၈ - ၅၂၈။ CS1 maint: location (link)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပုဗ္ဗာရုံကျောင်း&oldid=641295" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။